Supreme Group of Companies contributed 50 million MMK through the Visakha Foundation for the construction of oxygen plants in Hpa An General Hospital in Kayin State as well as Tee Tain Hospital in Chin State.
Since the start of COVID-19, Supreme’s companies and joint ventures have contributed around 600 million MMK for essential items including ventilators, PPE, masks, hand sanitisers, disinfectant, medical items, rice and food supplies, and additional support for frontline workers and volunteers.
Supreme Group, Mee Lin Gyaing Electric Power Company and Kyauk Phyu Electric Power Company are working together with the government and citizens for the COVID-19 prevention and restoration process.
We will continue to work hard to support the most essential sectors for the country and its citizens asaresponsible local business.
ကိုဗစ်ရောဂါကုသရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးကဏ္ဌတွင်ပါဝင်သည့် Oxygen Plant အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတည်ဆောက်ရေး အတွက်ကျပ်ငွေသိန်း ၅၀၀ ကို ၁၇.၁၂.၂၀၂၀ နေ့တွင် ဦးဆောင်စီစဉ်နေသည့် “ဝိသာခါဖောင်ဒေးရှင်း”မှတစ်ဆင့်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Covid-19စတင်ဖြစ်ချိန်မှယနေ့အထိပထမလှိုင်းနှင့်ဒုတိယလှိုင်းတို့တွင် အထူးအသက်ရှုစက် Ventilators ၊ PPE ၊ Mask ၊ လက်သန့်စင်ဆေးရည်၊ပိုးသတ်ဆေးရည်များ ၊ ဆန်အိတ်များ၊ ကျန်းမာရေးပစ္စည်းများ၊ ထိုင်းနိူင်ငံနယ်စပ်မှပြန်လာကြသည့်နိူင်ငံသားများအတွက်နေ့စဉ်ထမင်းဗူးပံ့ပိုးမှုများ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း/သီလရှင်ကျောင်း/ဘိုးဘွားရိပ်သာ/မိဘမဲ့ဂေဟာနှင့် Covid ရှေ့တန်းတွင်ဦးဆောင်ပေးလျက်ရှိသည့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုစသည်တို့နှင့်ငွေသားများအပါအဝင် #စုစုပေါင်းကျပ်၆၀၀၀သိန်းဝန်းကျင် ကို စူပရင်းကုမ္ပဏီအုပ်စု၏အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီများ၊ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများမှပံ့ပိုးလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
စူပရင်းကုမ္ပဏီအုပ်စု၏အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများ၊ မီးလင်းဂျိုင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီနှင့်ကျောက်ဖြူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကုမ္ပဏီများသည် Covid-19 ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် နိူင်ငံတော်အစိုးရ၊ပြည်သူများနှင့်အတူတကွလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဆက်လက်၍လည်းနိူင်ငံနှင့်ပြည် သူများ၏လိုအပ်မှုအရှိဆုံးနေရာနှင့်ကဏ္ဌများတွင်”မြန်မာတိုင်းရင်းသားပိုင် တာဝန်သိ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းစု အနေဖြင့်နိူင်ငံကိုချစ်သည့်စိတ်”ဖြင့်ပူးပေါင်းပံ့ပိုးပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။